Ny lalao Rainbox Six dia ho tonga amin'ny fitaovana finday | iPhone News
Tonga amin'ny fitaovana finday ny lalao Rainbox Six
Ignatius Room | 06/04/2022 11:00 | Lalao IPhone
Ubisoft, mpamorona ny lohateny Rainbox Six, lalao tifitra tetika, dia nanamafy fa izany miasa amin'ny dikan-teny finday, lohateny izay hanana toerana mitovy amin'izay hitantsika ao amin'ny dikan-teny ho an'ny PC sy consoles.
Araka ny Ubisoft, ny lalao dia noforonina hatramin'ny voalohany amin'ny fiheverana ny lalao atolotry ny fitaovana finday ary hohatsaraina ho an'ny finday sy takelaka marobe. Tahaka ny ankamaroan'ity karazana lohateny ity, Rainbox Six Mobile dia hitifitra ny tsena amin'ny fomba maimaim-poana.
Ny lalao dia ahitana resaka feo, rafitra fanamarihana mba hampahafantarana ny mpilalao sisa tsy mila miteny, jlalao cross eo amin'ny iOS sy Android fitaovana ary ny sarintany dia hitovy amin'ireo hita ao amin'ny PC sy console version amin'ny ady 5v5. Ho fanampin'izany dia hisy ihany koa ny faritra azo antoka sy ny fomba baomba.
Araka ny filazan'i Justin Swan, talen'ny famoronana an'ity kinova Rainbow Six ity ho an'ny finday:
Ny sarintany dia mitovy na latsaka, niova kely ny faharavana ary ny zavatra kely hafa dia nohatsaraina.
Voalaza ao koa fa nesorina ny endri-javatra sasany izay, noho ny fetran'ny interface tsara, dia tsy azo ampiasaina amin'ny fomba mitovy amin'ny filalaovana amin'ny PC na console.
Ity dikan-teny ity koa dia ahitana a rafi-pandrosoana manokatra ny opérateur. Taorian'ny 3 taona nisian'ny fampandrosoana, Ubisoft dia mamela ireo mpampiasa izay te hanandrana ny version alpha hisoratra anarana amin'ny alàlan'ny tranokala Ubisoft.
Ao amin'io tranonkala io ihany no ahafahanao miditra ny fampahalalana vaovao indrindra momba izay rehetra hatolotry ny Rainbow Six Mobile ho antsika.
Araka ny famoahana daty, amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra, fa azo inoana fa hivoaka eny an-tsena alohan'ny faran'ny taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Tonga amin'ny fitaovana finday ny lalao Rainbox Six
iPhone 14: Ny tsaho vaovao dia manondro ny fihenan'ny sary.
Efa misy ny beta voalohany ho an'ny mpamorona ny iOS 15.5 sy iPadOS 15.5